Mid kale oo looga adkaado dagaalka ka dhanka ah Trump, TikTok ayaa laga saari doonaa AppStore | Laga soo bilaabo Linux
Xulka wararka oo dhan | | Noticias
Qoraaladii la soo dhaafay waxaan wadaagnay macluumaad yar oo kusaabsan kiiska TikTok, taas oo asal ahaan ayaa lagu eedeeyay inuu ku wareejiyay xogta isticmaaleyaasha gaarka loo leeyahay server-yada Shiinaha, iyadoo ay jirto damaanad qaad ay shirkaddu ku hayso inaysan ku keydin xogta shakhsiga ah halkaas.
Kadibna dacwad ficil ah oo heer fasal ah ayaa laga xareeyay Maxkamadda Federalka ee California, iyagoo ku andacoonaya in TikTok ay si sharci darro ah oo qarsoodi ah uga ururisay xog badan oo shaqsiyadeed isticmaaleyaasha la garan karo una dirtay Shiinaha. Cabashadu sidoo kale waxay quseysaa ByteDance, oo ah shirkadda waalidkeed.
Sidoo kale, bilowga bisha Ogos, Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa soo saaray amarro fulineed oo lagu mamnuucayo Macaamilada Mareykanka ee leh WeChat, barnaamijka fariimaha ee ay leeyihiin Tencent Holdings, iyo ByteDance, milkiilaha TikTok, muddo 45 maalmood gudahood ah, kuna sifeynaya shirkadaha Shiinaha kuwo khatar ku ah amniga qaranka.
Sababaha kaas oo lagu bixiyay digreetada si loola dagaallamo khatarta ay leedahay WeChat Waa kuwan soo socda:
“WeChat waxay si otomaatig ah ugala wareegtaa macluumaad fara badan isticmaaleyaasheeda. Aruurinta xogtan waxay ku hanjabeysaa inay u oggolaato Xisbiga Shuuciga ah ee Shiinaha inuu helo macluumaadka shaqsiyeed iyo lahaanshaha Mareykanka. Intaas waxaa sii dheer, codsigu wuxuu qabanayaa macluumaadka shaqsiyeed iyo lahaansho ee muwaadiniinta Shiinaha ah ee booqanaya Mareykanka, sidaas darteedna u siinaya Xisbiga Shuuciga ee Shiinaha qaab lagu xakameeyo muwaadiniinta Shiinaha ee ku raaxeysan kara waxtarka bulshada xorta ah markii ugu horreysay noloshooda. nool. «
Wasaaradda Ganacsiga ee Mareykanka ayaa sheegtay in tallaabadani ay dhaqan galayso Axadda, Sebtember 20, 2020
Iyadoo laga jawaabayo amarrada fulinta ee Madaxweyne Trump saxiixay Agoosto 6, 2020, Wasaaradda Ganacsiga ayaa maanta ku dhawaaqday mamnuucitaan macaamilada la xidhiidha WeChat iyo barnaamijyada moobiilka TikTok si "loo ilaaliyo amniga qaranka Mareykanka."
Wadahadalkeeda, wasaaraddu waxay caddeynaysaa in "Xisbiga Shuuciga Shiinaha (CCP) uu muujiyey inuu leeyahay awood iyo ujeeddooyin loo adeegsado codsiyadan si loogu hanjabo amniga qaranka, siyaasadda arrimaha dibedda iyo dhaqaalaha Mareykanka. Mamnuucida lagu dhawaaqay maanta, markii la isku daro, waxay ilaalinaysaa isticmaaleyaasha Mareykanka gudihiisa iyadoo laga saarayo marin u helka barnaamijyadaas isla markaana si weyn hoos loogu dhigayo shaqadooda.
Sida laga soo xigtay wasaaradda:
“In kasta oo hanjabaadaha ay keenayaan WeChat iyo TikTok aysan isku mid ahayn, haddana way isku mid yihiin. Mid kastaa wuxuu uruuriyaa tiro aad u tiro badan oo ah xogta isticmaalaha, oo ay ku jiraan howlaha shabakadda, xogta goobta, iyo raadinta iyo taariikhda raadinta. Mid kastaa wuxuu si firfircoon uga qaybqaataa ku biiritaanka millatariga Shiinaha wuxuuna ku xiran yahay iskaashi qasab ah oo lala yeesho hay'adaha sirdoonka ee CCP. Isku darkaani wuxuu keenaa isticmaalka WeChat iyo TikTok oo abuuraya qatar aan la aqbali karin oo ku saabsan amniga qarankeena. "
Laga bilaabo Sebtember 20, 2020, soo socda macaamil ganacsi waa mamnuuc:
Bixin kasta oo adeeg ah oo lagu qaybinayo ama lagu dayactirayo codsiyada moobiilka ee WeChat ama TikTok, koodh-dhismeedka ama cusbooneysiinta dalabaadka iyada oo loo marayo dukaanka taleefanka gacanta ee khadka tooska ah ee Mareykanka (qoraal cad, macaamiisha Mareykanka) majiro wax TikTok ama WeChat ah oo laga soo dejiyo dukaanka appka Mareykanka mar dambe lama ogolaan doono illaa Axadda);
Bixin kasta oo adeeg ah iyada oo loo marayo codsiga mobilada WeChat ujeeddadeeduna tahay wareejinta lacagaha ama ka shaqeynta lacag bixinta Mareykanka.
Laga bilaabo Sebtember 20, 2020, ee loogu talagalay WeChat iyo Noofambar 12, 2020, ee loogu talagalay TikTok, Macaamilada soo socda waa mamnuuc:
Bixin kasta oo adeegyo martigelin Internet ah oo u oggolaanaya hawlgalka ama hagaajinta barnaamijka moobiilka ee Maraykanka;
Bixin kasta oo ka mid ah adeegyada shabakadaha gaarsiinta macluumaadka ee awood u siinaya hawlgalka ama wax ka beddelka barnaamijka moobiilka ee Mareykanka;
Bixin kasta oo abaabul ama qandaraas toos ah ka heshay jajabinta internetka ama adeegyada taraafikada ee u oggolaanaya shaqada ama wax ka beddelka barnaamijka moobiilka ee Mareykanka;
Isticmaal kasta oo koodhka, shaqooyinka ama adeegyada sameeya barnaamijka moobiilka ee hawlgalka barnaamijka softiweerka ama adeegyada la soo saaray iyo / ama laga heli karo Maraykanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Mid kale oo looga adkaado dagaalka ka dhanka ah Trump, TikTok ayaa laga saari doonaa AppStore
Axel ayala dijo
Waa maxay wax laga xishoodo in ay sameeyaan qoraalkan oo ay ku calaacalayaan tallaabooyinka Trump, markii ay u haystaan ​​inay difaacayaan barnaamijyada bilaashka ah. Tiktok waa tan ugu xun ee jirta marka ay timaado addoonsiga asturnaanta shaqsiyeed. Siyaasadeynta qoraalkan runtii waa ceeb.
Jawaab Axel Ayala
Marcelo orlando dijo
Kuwa aaminsan in waxa Trump sameynayo ay sax yihiin, waxaan ku celinayaa inay cadaalad darro tahay. Waa hagaag, haddii loo maleeyo in Trump uu sax yahay (oo aanan u maleyneynin), shirkadaha sida Microsoft, Facebook, iyo Google inay xirnaadaan. Hagaag, waxay sameeyaan isla wixii TikTok sida muuqata loogu eedeeyo. In kasta oo aan ka soo horjeedo qaadashada xogta anigoon oggolaansho ka helin isticmaaleyaasha, haddana waxaan sidoo kale taageeraa xorriyadda hadalka iyo sinnaanta sharciga hortiisa. Kaasoo aanan u arkin Mareykanku inuu sameynayo. Taabadalkeed, aniga waxay ila tahay in Trump uu leeyahay waji bir ah markii uu shirkadaha ajaanibta ah uga cadeynayo wax aan wada ognahay inay shirkadaha Mareykanku sameynayeen sannado. Qiyaas inay u egtahay goobtii Simpsons-ka markii Homer (Or Homer) uu u carooday aabihiis maxaa yeelay wuxuu ugu yeeray shil, laakiin wuxuu sidoo kale ku sameeyay wiilkiisa Bart. Tani waa sida aan macquul ahayn xaaladda Mareykanka ee Shiinaha. Mareykanku wuxuu basaasaa qof walba, haddii eedeymaha Trump ay run yihiin, wax isbeddel ah ma sameyneyso. Waxaa laga yaabaa in marmarsiiyo laga dhigto silcinta argagixisada ku xad gudubta Shuruucda dalkooda (USA). Laakiin taasi waxay sidoo kale khuseysaa Shiinaha haddii ay taasi jirto. Ka taxaddar inaadan ku kadsoomin. Aynu xusuusnaano in Shiinuhu ka mid yahay waddamada ugu deeqda badan lacag-bixinta Software-ka Bilaashka ah, haddaba aan u soo celino qayb ka mid ah nimcooyinkii ay na qabteen.
Ku jawaab Marcelo Orlando
Gabi ahaanba waan kugu raacsanahay. Laakiin dhammaanteen waan ognahay in basaasnimadu aysan ahayn sababta Trump uu u doonayo inuu u sii wado TIktok ama shirkad kale oo Shiineys ah ka hor.
Ku jawaab odc
Trump wuxuu kaliya sameeyaa waxa ay tahay in dhammaan hoggaamiyeyaashu sameeyaan: u halgama horumarka dalkiisa. Way isaga ugu codeeyaan taas. Waa go'aano ku saabsan ilaalinta dhaqaalaha. Shiinaha ayaa mamnuucay barnaamijyada ay u aragto inay yihiin "khatar". Ruushka iyagana wuu mamnuucayaa. Dabcan USA sidoo kale way qabataa. Qof walba oo guriga jooga wuxuu sameeyaa wuxuu rabo. Heerka siyaasadeed farqiga u dhexeeya waa mid aad u cad. Hal xaalad, waxaad oran kartaa in Trump uu si qaldan u sameynayo. FBI adiga ka daba iman mayso. Isku day inaad Shiinaha ka sheegto waxa ku saabsan Xi Jinping waxa aad ka leedahay Mareykanka ee ku saabsan Trump oo arag waxa dhacaya.
Linux From xoq (LFS): Mashruuc si aad u abuurto adigu Linux Distros ah